9 Maumbirwo Matipi Ekutora Anoshamisa Mifananidzo | Martech Zone
9 Maumbirwo Matipi Ekutora Anoshamisa Mapikicha
Chipiri, June 30, 2015 Chipiri, June 30, 2015 Douglas Karr
Ichi chingave chimwe cheakanakisa kuunganidzwa kwemazano ekutora mifananidzo andakambowana online. Chokwadi chinotaurirwa, ini ndiri anotora mifananidzo. Izvi hazvireve kuti handina kuravira kwakanaka. Ini ndinogara ndichishamiswa neakanakisa art iyo inogadzirwa kuburikidza neshamwari yedu Paul D'Andrea - mutori wemifananidzo anozivikanwa uye shamwari yakanaka muno muIndipolis. Tinodana kwaari kuti atiitire basa rakakura revatengi sezvo isu tichizvidza kushandisa mapikicha emastockiti emakambani emakambani.
Muvhidhiyo yavo yazvino, COOPH inopa 9 Maumbirwo Matipi eMubairo-anokunda Mapikicha Zvakandiitira kuti ndifunge zvakare kutora mifananidzo nekuti zvakanyanya sekunge mutori wemifananidzo ari kushanda pachinhu chake, zviri pachena kuti muimbi ari kufungawo nezvevateereri vake pavanenge vachitora pikicha yavo.
9 Maumbirwo Matipi
Rule yeTatu - Isa nzvimbo dzekufarira pamharadzano pamwe nechiitiko chakatemerwa muzvitatu zvakamira uye zvakatwasuka. Isa chinzvimbo chakakosha mumitsara.
Inotungamira Mitsetse - Shandisa mitsara yechisikigo kutungamira ziso mumufananidzo.
Diagonals - Diagonal mitsara inogadzira kufamba kukuru.
Kutuma - Shandisa mafuremu echisikigo akafanana nemahwindo nemasuo
Mufananidzo kusvika Pasi - Tsvaga musiyano uripo pakati penyaya neshure
Zadza iyo Furemu - Svika padhuze nevakuru vako.
Center Yakakura Ziso - Isa ziso rinotungamira pakati pemufananidzo kuti upe pfungwa yekuti ziso riri kukutevera.
Mapatani uye Kudzokorora - Mapatani anofadza, asi akanakisa ndipo kana pateni ikakanganiswa.
Symmetry - Symmetry inofadza ziso.
Zvichida rairo yakanakisa yakapihwa naSteve McCurry ndeyekuti mitemo inoitirwa kutyorwa uye kutsvaga yako maitiro.
Ongorora: Hatina mvumo yekugovana mapikicha - saka ive shuwa tinya nepositi iyi kutarisa vhidhiyo kana iwe usingaione iri pamusoro. Ndinokukurudzira kuti ushanyirewo Steve McCurry's online gallery uye tora basa risinganzwisisike raakagadzira pamusoro pemakore.
Tags: pakati rinotungamira zisonomuvhenganiswacoophdiagonalsnhamba pasizadza furemuinorongamitsara inotungamiramapatani uye kudzokororaMufananidzomazano ekutora mifananidzoushe muzvitatuSteve McCurrysymmetry
Jun 7, 2016 na12:39 AM
Douglas Karr inofanira kushanda pamwe chete naSteve McCurry